FATY NIADIANA TENY IMERIMANJAKA Zavatra maro mbola mampiahiahy, hoy ny zanany
Ny andron’ny nahafatesan’ilay raim-pianakaviana ny 29 novambra no daty ao anatin’ilay didy miafina. Lasa fisainana tamin’izay ny fianakavian’ny nodimandry izay efa maty vao tonga tany amin’ny hopitaly.
Mitantara ny fampandrenesana azy ny zanany Haja B: “Nampandrenesina izahay fa marary tampoka i dada izay nipetraka tamin’ilay olon-tiany. Voalaza fa sempotsepotra izy. Afaka fahefatr’adiny, nisy antso indray fa marary mafy izy. Vetivety teo anefa dia nolazaina fa tsy tana ny ainy. Ilay mpitondra taksi azy tany amin’ny hopitaly hatrany no nampita hafatra. Manahy izahay sao tsy fahafatesana voajanahary ka izay no nahatonga anay hampanao fitiliana ny nahafaty azy na ny “autopsie”. Ka na tsy nivaly aza io, dia efa nampanao “contre autopsie” ny an-daniny izay namoahana ny faty tao am-pasana. Hatreto aloha tsy mbola hita ny tena marina, ny polisy ihany no afaka mahafantatra izany voalohany.” Ankoatra izay, mahavalalanina ireto zanaky ny maty hatrany ny antony handorana ny rainy, araka ny didy miafina, izay tsy fomba amam-panao eo amin’izy ireo.